Harsha Kiran's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Harsha Kiran
Harsha Kiran ndiye mubatanidzwa uye mukuru wekutsvaga paSeotribunal, gwara rinotungamirwa nedata rekuhaya SEO mamiririri.
Organic Tsvaga Statistics ye2018: SEO Nhoroondo, Indasitiri, uye Maitiro
Chishanu, June 22, 2018 Chishanu, June 22, 2018 Harsha Kiran
Yekutsvagisa injini yekugadzirisa ndiyo nzira yekukanganisa kuoneka kwewebhu webhusaiti kana peji rewebhu mune yewebhu yekutsvaga injini isina kubhadharwa mhedzisiro, inonzi yakasikwa, organic, kana mibairo yawanikwa. Ngatitarisei panguva yekutsvaga injini. 1994 - Yekutanga yekutsvaga injini Altavista yakavambwa. Ask.com yakatanga kuseta zvinongedzo nekuzivikanwa. 1995 - Msn.com, Yandex.ru, uye Google.com zvakatangwa. 2000 - Baidu, yekuChina injini yekutsvaga yakatangwa.